Zvapupu zvaJehovha zvava nenguva refu zvichizivikanwa sevanhu vanodzidziswa naMwari. Pane zvikoro zvinokosha zvakaitirwa vaya vanopa nguva yavo yakazara kubasa rokuparidza Umambo kuitira kuti vagone ‘kuita ushumiri hwavo zvizere.’—2 Timoti 4:5.
Chikoro Chebasa Roupiyona. Piyona wenguva dzose paanopedza gore ari mubasa renguva yakazara, anopinda chikoro chemazuva matanhatu chinogona kuitwa paImba yoUmambo iri pedyo. Chinangwa chechikoro chacho ndechokubatsira piyona wacho kuti aswedere pedyo naJehovha, awedzere kubudirira munzira dzose dzoushumiri, uye arambe achiita basa akatendeka.
Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo. Chikoro ichi chemwedzi miviri chinoitirwa kudzidzisa mapiyona agara nebasa anoda kusiya misha yawo kuti anoshumira chero kwaanodiwa. Chaizvoizvo vanenge vachiti, “Ndiri pano! Nditumei!” vachitevedzera muEvhangeri mukuru pane vose vakamboshumira pasi pano, Jesu Kristu. (Isaya 6:8; Johani 7:29) Kuti munhu atamire kure nokumusha kwake kungareva kuti angafanira kuchinja mararamiro ake kuti asava netwakawanda-wanda. Tsika, mamiriro okunze, uye zvokudya zvingave zvakanyatsosiyana nezvaakajaira. Zvingatova zvichikosha kuti adzidzire mumwe mutauro. Chikoro ichi chinobatsira hama nehanzvadzi dzisina kuroora kana kuroorwa uye vakaroorana, vane makore 23 kusvika ku65, kuti vave neunhu hwechiKristu hwavachazoda mubasa ravo uye unyanzvi huchazoita kuti vakwanise kushandiswa zvizere naJehovha nesangano rake.
Chikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi. MuchiHebheru, “Giriyedhi” zvinoreva “Murwi Weuchapupu.” Kubvira pakatangwa chikoro cheGiriyedhi muna 1943, vanopfuura 8 000 vakapedza kudzidza pachikoro ichi vakatumirwa semamishinari kuti vanopa uchapupu “kusvikira kumugumo wenyika” uye vave vachibudirira zvikuru. (Mabasa 13:47) Mamishinari paakatanga kusvika kuPeru, munyika yacho makanga musina ungano. Iye zvino mava neungano dzinodarika 1 000. Mamishinari edu paakatanga kushumira ari kuJapan, munyika yacho maiva neZvapupu zvisingasviki 10. Iye zvino mava nezvinopfuura 200 000. Kosi yeGiriyedhi yemwedzi mishanu inosanganisira kunyatsodzidza Shoko raMwari. Vaya vari kushumira semapiyona chaiwo kana kuti mamishinari, vari pahofisi dzemapazi, kana kuti mubasa rokufambira vanokokwa kuchikoro ichi kuti vanyatsodzidziswa kuti vabatsire pakudzikamisa uye pakusimbisa basa romunyika yose.
Chinangwa cheChikoro Chebasa Roupiyona ndechei?
Chikoro Chevazivisi Vemashoko oUmambo chakaitirwa vanaani?